Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): October 2016
The Kachins of Australia Urged Burmese Government To Stop Unjust Offensives In Kachin Region
Photo Credit: Bai Le
ရှေ့တန်းမှပြန်လာသော တပ်မတော်သားများကြိုဆိုရန် ဒသခံများသွားရောက်မည်မဟုတ်
at 10/30/2016 09:40:00 AM
U Ravika and2others.
ရှေ့တန်းမှပြန်လာသော တပ်မတော်သားများကြိုဆိုရန် ဖလမ်းမြို့ပြည်သူနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများကို မြို့နယ်အာဏာပိုင်ကညွန်ကြားထားသော်လည်း ဒေသခံများသွားရောက်မည်မဟုတ်
ရှေ့တန်းမှပြန်ရောက်လာမည့် ဖလမ်းမြို့ ခ.လ.ရ တပ်မတော်သားများကို ကြိုဆိုရန် ဖလမ်းမြို့ပြည်သူများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကို ဖလမ်းမြို့နယ် အာဏာပိုင်းများက ယမန်နေ့က ညွှန်ကြားထားကြောင်း ဒေသခံများထံမှသတင်းရရှိသည်။
ယင်းကဲ့သို့ကြိုဆိုရန်အတွက် ဖလမ်းမြို့ရပ်ကွက်တစ်ခုမှ ၁၀ယောက်နှုန်းပါဝင်ရန်, ဖလမ်းမြို့ အ.ထ.က (၁)ကျောင်းမှ ဘင်ခရာအဖွဲ့ ကျောင်းသား ၄၀ နှင့် ဆရာ မ ၁၀ ယောက်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကြိုဆိုပွဲကို အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင် ဖလမ်းမြို့တပ်ကုန်းတွင်ကျင်းပမည်ဟုသိရသည်။
"နိင်ငံခြားက ကျူးကျော်သူတွေကိုတိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကို ကြိုဆိုဖို့ မလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ စစ်အစိုးရတုန်းကတောင် ဒီလိုမကြိုဆိုဖူးဘူး။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာလဲဆိုတာမသိဘူး။ Sunday နေ့ဆိုတော့ ကျွှန်တော်တို့မှာတခြားအစီအစဉ်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မသွားဘူး"ဟု ဖလမ်းမြို့ မြို့မိမြို့ဖကော်မတီဥက္ကဌ ဦးဟရန်လောမ်ကပြောသည်။
ယင်းကြိုဆိုပွဲသို့ပါဝင်ရန် ဖလမ်းခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင် ၄င်းရုံး၌ပါးစပ်ဖြစ်ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဦးဟရန်လောမ်ကဆိုသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖလမ်းခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ယနေ့ည ၈ နာရီခွဲတွင်ဆက်သွယ်သော်လည်း ဆက်သွယ်၍မရရှိပေ။
"တနင်္လာနေ့က ကချင်ညီအစ်ကိုတွေတွက်ဆုတောင်းလို့ပြီးတာဘဲရှိသေးတယ်။ ခုလိုလုပ်တာက ကျွှန်တော်တို့ကိုစော်ကားနေတာလားလို့တောင်ယူဆလို့ရတယ်။ ဒါဟာ ဖလမ်းကို သွေးတိုးစမ်းတာဘဲ။ ဖလမ်းကရိုးအေးတယ်ဆိုပြီးနှိမ်တဲ့သဘောဘဲ"ဟု ဖလမ်းမြို့ဒေသခံ ဆလိုင်းငယ်ပီးကပြောသည်။
ဖလမ်းမြို့ အ.ထ.က( ၁)ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးဗျက်သို က "မြို့နယ်ပညာရေးရုံးကလည်းဖုန်းနဲ့ဖိတ်တယ်။ တပ်ကုန်းက ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်လည်း ကျောင်းမှာကိုယ်တိုင်လာပြီး အကူအညီတောင်းလို့ သွားဖို့ပြောထားတယ်။ ရုံးကလည်းပြောတော့ ကျွှန်တော်တို့က အထက်ကညွှန်းကြားတာလုပ်မယ့်သူတွေဘဲလေ"ဟုပြောသည်။
ထို့ပြင် ဖလမ်းမြို့ Farthawk ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးနိုဘီလ်ဆုမ်းက "မနေ့က မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးကနေ ရှေ့တန်းလို့ဘဲသိတယ်။ ဘယ်ဒေသကပြန်လာကြတာလဲဆိုတာမသိဘူး။ လူ ၁၀ယောက်တော့ပြောထားပြီးပြီ"ဟုပြောသည်။
ဖလမ်းမြို့တွင် ရပ်ကွက် လေးခုရှိသည်။
ဖလမ်းမြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင် ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဈေးဆိုင်များအားလုံးပိတ်ကာ ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။
at 10/30/2016 09:21:00 AM
မြန်မာမုဒိန်းတပ်မတော်က မုဒိန်းစစ်သားတွေရဲ့ တိရစ္ဆာန်ထက်ဆိုးရွားတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခု -
စစ်သားလေးယောက်က သူတို့မိသားစုရဲ့ ရွှေ၊ ငွေ၊ ရတနာတွေကို လုယူတဲ့အပြင် သူ့ကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး၊ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် သမီးကိုလည်း ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ဦးရှဉ့်ကျကျေးရွာက အသက် ၄၀ အရွယ် အမျိုးသမီးက ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောပြပါတယ်။
"သူတို့က ကျွန်မကို အိမ်ထဲခေါ်သွားတယ်၊ ကျွန်မရဲ့ အင်္ကျီကိုစုတ်ဖြဲပြီး၊ ပုဝါ [ဟေဂျာဘ်] ကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်" လို့ ကလေး (၇) ဦးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက သူ့ရဲ့ ၀ါးတဲအိမ်ငယ်လေးရဲ့ ရှေ့မှာ ထိုင်ပြီး ရိုက်တာသတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောပါတယ်။ "နှစ်ယောက်က ကျွန်မရဲ့ လက်မောင်းတစ်ဖက်စီကို ချုပ်ထားတယ်။ နောက်တစ်ယောက် အနောက်ဘက်ကနေ ကျွန်မရဲ့ ဆံပင်ကိုဆွဲထားပြီး၊ ကျွန်မကို မုဒိန်းကျင့်ကြတယ်" လို့ သူမကပြောတယ်။
“They took me inside the house. They tore my clothes and they took my head scarf off,” the mother of seven told Reuters in an interview outside her home,acramped bamboo hut. “Two men held me, one holding each arm, and another one held me by my hair from the back and they raped me,” she said.
via The Irrawaddy - English Edition.
at 10/28/2016 10:35:00 AM
(ဘုရားစကားနား﻿ထောင်﻿ပြီးသူများသာမယားမပြစ်﻿မှားဘူး မုဒိမ်းမကျင့်﻿ဘူး/ရွာမီးမရှို့ဘူး /ဓားပြ မတိုက်﻿ဘူး အဲဒါ﻿ကြောင်းအသက်﻿ရှင်﻿တဲ့ ဘုရားကကာကွယ်﻿﻿ပေး﻿နေတာပါ)
KNU ရဲ့ အမာကျောဆုံးခံစစ်စခန်းဖြစ်တဲ့ ကော့မူးရာ(ဝမ်ခသစ်)
စခန်းကို ဗမာ့တပ်မတော်က ၁၉၉၅ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၈ ရက်က
နေ ၂၁ ရက်နေ့အထိ
၁၀၅ မီလီမီတာ ဟောင်ဝစ်ဇာအမြောက် ၆ လက်
၇၆ မီလီမီတာတောင်ပေါ်ပစ်အမြောက် ၈ လက်
၁၂၀ မီလီမီတာစိန်ပြောင်း ၂၂ လက်
ပွိုငိ့ ၅ သေနတ်
၆၀ မီလီမီတာ စိန်ပြောင်းများစွာ
တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ပြီး ခြေလျင်တပ်တွေက တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရ
တယ်လို့ စာရေးဆရာ မြန်မာပြည်သားကိုကို က သူ့ရဲ့ငါ့နိုင်ငံ
တော် ငါ့နိုင်ငံသား ငါ့တပ်မတော်အတွက် အပိုင်း(၃)မှာမှတ်တမ်း
ဒီနေရာမှာသတိထားမိတာက ပစ်ကူအနေနဲ့ အမြောက်တပ်ဖွဲ့
တစ်ဖွဲ့သာအသုံးပြုထားပြီး ကျန်တဲ့ တိုက်လေယာဉ် တင့်ကား
သံချပ်ကာ ကားတွေ ပါဝင်တိုက်ခိုက်တာ မတွေ့ရပါဘူး
၂၀၁၁ခုနှစ်မှာ KIA နဲ့ တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်လာတဲ့စစ်ပွဲတွေကစပြီး
ကန့်အရေးအခင်းမှာတော့ ခြေလျင်တပ်တွေအပြင် လေတပ်
အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ KIA ရဲ့ Gildon စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာ
တော့ KNU ရဲ့ကော့မူးရာစခန်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာ အသုံးပြုခဲ့
တဲ့အမြောက်အရေအတွက်တွေထက် (၁၀)ခန့် သုံးနေတယ်လို့
ယူဆရပြီး တိုက်လေယာဉ်တွေကိုနေ့စဉ် ရက်ဆက်အသုံးပြုနေ
သလို သံချပ်ကာကား တင့်ကားတို့ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်အောင်
တပ်မတော်အနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့မြေပြင်တပ်တွေ အထိအခိုက်နည်း
တွေကြဲချတာ အဆန်းတကြယ်မဟုတ်ပေမယ့် ဒီလောက်လက်
နက်ကြီးတွေပစ် လေယာဉ်ဗုံးတွေကြဲချပေမယ့် ကြံကြံ့ခံနေနိုင်တဲ့
KIA ရဲ့သတ္တိဗျတ္တိနဲ့ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားတွေကို မချီးကျူးပဲနေနိုင်
ဘေးနားမှာ ဗုံး တစ်လုံးကွဲရင်တောင် ကိုယ်ပေါက်လိုက်တဲ့အီး
ကြောင့် ကိုယ်ုပန်လန့်တတ်တဲ့ ချေ သူငယ်ပမာ ပြူးတူးပြဲတဲဖြစ်
နေတတ်တဲ့ တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့လည်း ကျွန်ုပ်နဲ့နည်းတူ
KIA ကိုပါးစပ်ထဲက ထုတ်ပြောကာမချီးကျူးရင်တောင် စိတ်ထဲ
မရတဲ့အပြင် တောင်ကုန်းပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်အလောင်း
ရင် KIA ရဲ့ ခံစစ်ဆင်နွှဲနေပုံက ခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာ တစ်ခါမှ
မမြင်တွေ့ဖူးတဲ့ ခံစစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါပြီ
KNU ရဲ့ ကော့မူးရာ(ဝမ်ခသစ်) စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတုန်းကKNU
တာနည်းပြီး အမြောက်ကွဲတဲ့အသံကြောင့် နားစည် ကွဲပြီးသေ
တာများတယ်လို့ စာရေးဆရာက ဆိုထားပါတယ်
အခုလည်း KIA တွေအနေနဲ့ ဒီသင်ခန်းစာကို ကောင်းကောင်း
နမူနာယူပြီး နားမကွဲအောင် တစ်ခုခုများစီမံထားလေပြီလား
DJ နားကြပ်တပ်ထားပြီး တပ်မတော်ရဲ့ တိုက်စစ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံခုခံ
နေကြတာလား ဆိုတာကိုတော့ ကာယကံရှင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့
KIA သူရဲကောင်းတွေကို မေးလိုက်ချင်မိတော့တယ်
ကချင်တွေ ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတာကို ကမ္ဘာသိဖော်ပြသွားပြီ။ (BBC )
at 10/28/2016 10:25:00 AM
BBCကတော့ ကချင်တွေ ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်
တပ်ရဲ့ ယုတိမာမှုကိုလည်း ဖော်ပြသွားတယ်။ဗမာ
တွေများများကြည့်ကြပါ။ခင်ဗျားတို့ ဗမာတွေ ကချင်စစ်ပွဲ
at 10/27/2016 11:06:00 AM
at 10/27/2016 11:05:00 AM
ကိုထင်ကျော်ကို မြောက်ဥက္ကာလာပ မြို့နယ်စခန်းက ပုဒ်မ ၅၀၅ က နဲ့ ယနေ့တရားစွဲလိုက်ပြီ
ဒီ ည စခန်းအချုပ်ခန်းထဲမှာ ချုပ်ထားမည်ဟုသိရ
at 10/27/2016 11:04:00 AM
Hugawngasara ni ,rai nga ai Sau kamai,Myu htan deng
Sarama Shawng Htawk tsing pan ( shanglawt tsing)
Marit nwai let shakram dat ai.Ngwi pyaw ai sumsing mung dan hta R I P
Jinghpaw Kasa de Myusha lam hte seng ai Ga Shagawp ni, Laika Ngau ni hpe galoi Mung ka ya nga ai Saranum Kaba Ah Nan (Shawnghtawk Tsin Pan) gaw October (26) ya jahpawt hkying (3:00) ten hta Madu Yesu hta yup pyaw mat sai lam na chye lu ai majaw Jinghpaw Kasa hte rau Jinghpaw Kasa Shiga hti Myusha ni yawng myit n pyaw hkam sha nga ga ai.
at 10/27/2016 10:59:00 AM
Jahkyi Pan Naw ·
KIAရဲ့ ဘယ်စခန်းကို သိမ်းလိုက်ပြီ။
တပ်မတော်သားတွေ ဘယ်လောက်ကျဆုံးပြီဆိုတာ... ကြားကိုမကြားချင်ဘူး။
အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်တွေ ဒို့နိုင်ငံ ကျော်တက်နေပြီ။ရပ်ကြပါ.တော်ကြပါ။
ခုတလော.. မြစ်ကြီးနား ခုတင်၃၀၀ဆန့် တိုင်းစစ်ဆေးရုံမှာ KIA ရဲ့ Gidon post ကို သွားတိုက်၍ဒဏ်ရာရ ဆေးကုသခံယူနေသော တပ်ကြပ်ကြီးကပြောရာမှာ ကျုပ်တို့က တပ်မ ၆၆.၈၈ တပ်မ နှစ်ရင်း က KIA ရဲ့ တပ်ရင်းတစ်ရင်းပဲရှိတဲ့GIDON post ကို တစ်လကျော်ကြည်းကြောင်း၊လေကြောင်းတို့နှင့်တိုက်တာဘာဖြစ်လို့ တိုက်လို့မနိုင်တာလဲတဲ့ ၎င်းတပ်ကြပ်ကြီးစစ်ဆေးရုံ၌ ညည်းတွားနေတာကို ကြားနေမိ၏။